नेपाली यी चर्चित अभिनेत्री’हरूको पढाइ कति? थाहा छ..? थाहा पाउनुहोस् ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/नेपाली यी चर्चित अभिनेत्री’हरूको पढाइ कति? थाहा छ..? थाहा पाउनुहोस् !
प्रियंका कार्कीः स्नातक (फिल्म डेभलभमेन्ट)